23 Degree Khao Yai -2BR Luxury Condo - I-Airbnb
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguYodsakarn
I-brand yodidi lwe-condo, i-23 Degree yeholide yakho e-Khao Yai. I-76-sqm, igumbi elinefenitshala epheleleyo likulungele ukuba uphumle eKhao Yai.Iiyure nje ezi-2 ukusuka eBangkok kunye ne-10 min ukusuka eKhao Yai National Park. 2 ibhedi ephindwe kabini + umatrasi ungahlala ukuya kuthi ga kwi-6 yabantu.
Wamkelekile kwindawo yam yokuhlala! Nceda uzive usekhaya kule ndawo ifanelekileyo kwaye uyenze ibe yeyakho.Ijikelezwe yintaba, le ndawo intsha yodidi oluphezulu yeholide yakho eKhaoYai.
Le yi-condo yodidi, i-75 sqm, igumbi lokulala elikhulu kunye negumbi elinye lokulala elinebalcony ende.Kukho amagumbi okuhlambela ayi-2 anebhafu yokuhlambela, indawo yokuhlala enefenitshala epheleleyo kunye nendawo yokutyela enekhitshi elixhotyisiweyo elinokusotywa njengetafile yokutyela yabantu aba-4.
Ikhitshi lixhotyiswe ngefriji, imicrowave, i-oven yombane, iketile yombane kunye netoaster. I-WiFi yasimahla, iiTV ezimbini ezinkulu kunye nesidlali seDVD esineemuvi ezithile zeCD zibonelelwa kwigumbi.
Nokuba luhambo lwebhayisekile, uhambo lwegalufa, okanye iholide nje, le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwaye wonwabe iKhao Yai.
4.80 · Izimvo eziyi-298
Relax, ngasese kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho kwindawo yabucala kunye nobuhlobo.
-Ipaki yeSizwe yaseKhao Yai
- Igadi yaseBloom
- Igadi yaseGran Monte
- Iphuli yeBlue
-Imarike edadayo yaseKhao Yai
- Umyezo weentyatyambo
- Ifama kaJim Thomson
- Ifama yeChokchai
- Ifama yaseSuwan
- Umsi House
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pak Chong city